तपाईलाई थाहा छ ? यसरी भएको थियो भगवान रामको मृत्यु ! - Internet Khabar
January 2, 2019 January 8, 2019 Internet Khabar
र रामायणबारे जानकारी राख्नेलाई यो पनि थाहा नहुने कुरै भएन कि भगवन राम १४ वर्ष वनवासमा रहे। र १४ वर्षपछि अयोध्या फर्किए। तर उनको मृत्यु कसरी भयो ? यो विषयका पछाडि भने ठूलो रहस्य लुकेको छ।
पद्म पुराणमा उल्लेख गरिएको एक कथाका अनुसार, एक दिन एक वृद्ध सन्त भगवान रामको दरबारमा पुगे । उनले भगवान रामसँग एक्लै वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसपछि रामले ती सन्तलाई आफ्नो गोप्य कोठामा लगे र ढोकामा आफ्ना भाई लक्ष्मणलाई राखे । सन्तसँगको कुराकानी कसैले भंग गरे उसलाई मृत्युदण्ड दिइने रामले चेतावनी पनि दिए। लक्ष्मणले आफ्ना जेठा भाईको आज्ञा स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कोठमा एक्लै छाडेर आफू ढोकामा पहरा दिन बसे।
लक्ष्मणले सोच कि ऋषि दुर्वासालाई भित्र जान नदिए रामले श्राम लिनु पथ्र्यो। तर यदि लक्ष्मणले आफ्ना भाईको आज्ञाविरुद्ध गए भने उनलाई मृत्युदण्ड मिल्थ्यो । अन्तमा उनले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्ने निर्णय गरे र आफैं कोठाभित्र छिरे।
त्यसपछि लक्ष्मणलाई मृत्युदण्ड दिन चर्खामा बाँधियो । लक्ष्मणलाई चर्खामा बाँधिएको देखेर राम पनि धर्म संकटमा परे । उनी एकतर्फबाट आफ्नै फैसलाबाट मजबुर थिए भने दोस्रोतर्फबाट भाईको प्रेममा तड्पिँदै थिए।
त्यसबेला आफ्नो भाई लक्ष्मणलाई मृत्यु दण्ड पाउनुभन्दा पनि देशभन्दा बाहिर जान भने । त्यसबेला देशनिकालाको सजाय पनि मृत्युदण्ड बराबर नै थियो । तर लक्ष्मण आफ्नो जेठा भाई रामबिना एक क्षण पनि रहन सक्दैन थिए । आखिरमा उनले मृत्युदण्ड नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरे।
उनी सरयू नदीको छेउमा गए र संसारबाट मुक्ति पाउने इच्छा जाहेर गर्दै त्यसमा हाम फाले । यसप्रकारले लक्ष्मणको जीवनको अन्त भयो। उनी पृथ्वी लोकबाट दोस्रो लोकमा गए । लक्ष्मण सरयू नदीभित्र गएपछि उनी अनन्त शेषको अवतारमा र विष्णु लोक गए।
आज सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् बजार भाउ
अब सवारीसाधनमा ज्येष्ठ र असक्त नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट
दाङको नम छुः बौद्ध गुम्बा पर्यटकीय केन्द्र बन्दै
संरक्षणको अभावमा सङ्कटमा थारु सङ्ग्रहालय